सार्वजनिक स्थानमा अङ्ग प्रदर्शन गर्नेलाई कडा कारवाही हुने देशहरु ! हेर्नुहोस् यस्तो छ कानुन ! – Todays Nepal
हरेक देशको कानुन आफ्नो संस्कार साथै विभिन्न कुराहरुलाई मध्यनजर गरेर निर्माण गरिएको हुन्छ। जसका कारण कुनै पनि अपराद्को फरक-फरक सजाय हुने गर्छ। कोहि देशहरुमा ठुला-ठुला अपराधको लागि पनि सामान्य सजाय हुने गर्छ भने कुनै देशमा भने चाहीं सानो अपराधको लागि पनि ठुला साथै कठोर सजाय व्यवस्था गरिएको हुन्छ। महिलाहरुले जानेर होस् या नजानेर गरिने अंग प्रदर्शनलाई विभिन्न देशहरुमा कस्तो कानुनी व्यवस्था रहेको छ त? हेर्नुहोस्
यस देशमा कोहिले पनि खुलेआम हतियार राख्न सक्छ तर अंग भने प्रदर्शन गर्न पाउँदैन। यस देशमा यदि महिलाले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा प्रहरीले हिरासतमा लिने साथै कारवाही गर्ने कानुन रहेको छ।
रुस देश कानुनको मामलामा धेरै क्रुर मानिने गरिन्छ। यस देशमा यदि कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा ५० डलर सम्मको सजाय व्यवस्था गरिएको छ।
पाकिस्तान एक मुस्लिम देश भएका कारण यस देशका कानुनहरु धेरै कडा हुने गर्छ। यस देशमा यदि कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा धेरै ठुलो सजाय हुने गर्छ। यस देशमा प्राय महिलाहरु सम्पूर्ण शरीर छोपेर हिड्ने कानुन छ भने निजि अंगनै देखा परेमा कस्तो सम्मको सजाय हुन्छ भनेर सोच्न पनि सकिँदैन।
ब्राजीलको रहन-सहन हेर्ने हो भने निजि अंग देखिएमा खासै केहि कारवाही हुन्छ जस्तो देखिदैन। तर यस देशमा यदि कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा ३ साल सम्मको कारागार हुने व्यवस्था रहेको छ।
अहिले युद्धका कारण छेद-विछेद भएको यस देशमा पनि निजि अंग प्रदर्शनको विरुद्ध कडा कानुन रहेको छ। कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा कारागार जानु पर्ने हुन्छ। जब कि यस देशमा हिजाब नलगाउनेको एस्समेत कारागारको बस हुने गर्छ।
यस देश पनि मुस्लिमले भरिएको देश मध्य एकमा पर्ने गर्छ। यस देशमा पनि स्तनको विषयमा धेरै कडा कानुन रहेको छ। कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा जो-कोहिले पनि कुट-पिट गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कुट-पिट पछि पनि महिलाहरुलाई कारागार हुने गर्छ।
यस देशमा पनि महिलाहरुलाई धेरै संस्कारले बाँधेर राख्ने गरिन्छ। यस देशमा सार्वजनिक स्थलमा पुरै शरीर नढाकि हिड्नको लागि कानुनले रोक लगाएको छ। सार्वजनिक स्थलमा हाँस्न समेत रोक लगाइएको छ। स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा भने धेरै कडा कारवाही रहेको छ।
संसारकै गरिब मध्यको एकमा पर्ने यस देशमा पनि महिलाहरुलाई धेरै पछाडी पारिएको छ। यदि कोहि पनि महिला अथवा युवतीले आफ्नो स्तन देखाएमा अथवा देखिएको अवस्थामा ५० कोर्रा लगाउने प्रावधान रहेको छ।
विभिन्न स्रोतहरूका अनुसार ब्रिटिसले भिसा शुल्कबाट गोरखाहरू बापत करिब ४० अर्ब असुलीसकेको छ